Gbọ mmiri kpochapụwo nke Xochimilco Gardens | Akụkọ Njem
Gbọ mmiri kpochapụwo nke Xochimilco Gardens
Mariela Carril | | America, General, Mexico
Otu n'ime ndị nnọchianya mejupụtara Mexico City bụ Xochimilco. Ọ dị na ndịda ọwụwa anyanwụ nke obodo ahụ na aha ahụ si n’asụsụ Nawatụl: akwa ifuru.
Saịtị a emeela ochie mana taa ọ ghọrọ ogige mara mma ebe ndị obodo na ndị njem na-aga ma na-ebugharị n'ụgbọ mmiri nwere ọmarịcha mma. Boatgbọ mmiri ahụ na-agafe Xochimilco abụrụla ezigbo ọdịnala.
2 Ọdọ Mmiri Xochimilco
3 Na-agagharị site na canals nke Xochimilco
Obodo nke E wuru Mexico na ọdọ mmiri sara mbara na tupu ọbịbịa ndị Spen amalitelarịrị ya n'etiti ọwa na agwaetiti.
Kedu? Okwu ahụ chinampa na-ewepụta usoro nke ọrụ ugbo Mesoamerican: a na-ekpuchi elu ebe a na-akụ akwụkwọ nri na ifuru. Ha sere n'elu ọdọ mmiri na ọdọ mmiri ma bụrụ ndị nyere Tenochtitlán echiche obodo na-ese n’elu mmiri.
Xochimilco dị mkpa site na akụkọ ihe mere eme, ọdịbendị na ọdịdị mmadụ n'ihi na ọ bụ ebe chinampas. A) Ee, na 1987 UNESCO nyere ya nsọpụrụ nke World Heritage nke mere na ebe ahu na mmekorita ya na uzo ochie agaghi efu n’obodo.
Ọdọ Mmiri Xochimilco
Na Ndagwurugwu Mexico enwere ọdọ mmiri ise na otu n’ime ha bụ Xochimilco. Ọ bụghị nha ọ dị ọtụtụ narị afọ gara aga na e meela ka ọwa ma ọ na-ejigide otu akụkụ ala ma na-anọgide na-agbakwunye na ọdọ mmiri abụọ ọzọ na otu.
Ọ bụ ọdọ mmiriNdị ọzọ na ndagwurugwu ahụ bụ mmiri nnu, ma mmiri ha adịghị a drinkụ. Ruo ọtụtụ narị afọ, ọ rụrụ ọrụ maka ọrụ ugbo na isi mmalite ya sitere na ugwu ndị dị nso. Mgbe Mexico toro, mmiri si n’isi mmiri ndị a malitere inye obodo ahụ ọtụtụ mmiri na ọdọ mmiri ndị dị na ndagwurugwu ahụ malitere ịkpọ nkụ.
Nke a mere n’agbata ngwụcha narị afọ nke iri na itoolu na mmalite nke 80 wee gharakwa imebi ihe ndị ọzọ dị ndụ, kapeeti na lili. N’ezie, “ndị mwakpo” ndị a metụtara ụdị ihe dị iche iche nke ụmụ amaala na ọnọdụ ahụ ka mma na XNUMXs mgbe etinyechara batrị na nsogbu gburugburu.
Ọdọ mmiri Xochimilco nwere omimi kachasị nke mita isii Mmiri dị na ọwa mmiri ya esighị na Cerro de la Estrella pụta ma ha na-enweta ọgwụgwọ pụrụ iche ka ha wee ghara imetọ ha.
Na-agagharị site na canals nke Xochimilco
Ihe ụgbọ mmiri dịkarịrị nso n'etiti etiti ụgbọ mmiri enyi na enyi dị iche iche. Enwere Fernando Celada na Laguna del Toro, ị nwere ọzọ na Laguna de Caltongo, n'okporo ụzọ Nueva León, na onye ọzọ na njedebe Calle del Salitre na Calle del Nogal.
Ọ bụrụ na ị chọghị izute ọtụtụ mmadụ Ọ bụghị ihe amamihe dị na ịme ije ndị a na ngwụsị izu n’ihi na ọ bụ ụzọ esi apụ ndị Mexico ụzọ. Ewezuga ma ọ bụrụ na ụbọchị ahụ enwere mmemme pụrụ iche dịka asọmpi nke Kachasị Mma Ifuru nke Ejido, na May 20 nke bụ Fiesta de San Bernardo ma ọ bụ ememme Niñopan.
Enwere ụgbọ mmiri kwa ụbọchị n'izu, ọtụtụ narị ha. Aha eji mara ha trajineras a na-esekwa ha n’ọmarịcha agba. Ha nwere aha ebe ọ bụ na onye nwe ya na-eme ha baptizim dịka nwunye ya, enyi ya nwanyị ma ọ bụ otu n’ime ụmụ ya.
Gwọ na-adaberekarị na trajinera nha na ogologo oge njem ahụ, ma ọ bụ ihe niile banyere haggling. I nwere ike ịga ije na ọkara otu awa, nkeji iri anọ na ise, elekere, awa abụọ. Ihe dị mma bụ na ị nwere ike iburu nri na ihe ọ drinkụ drinkụ ma rie ka ị na-eje ije ebe ọ bụ na ụgbọ mmiri ndị kasị ukwuu nwere tebụl n'etiti ebe mmadụ na-anọdụ ma na-anabata.
E nwere ụgbọ mmiri ndị nwere ìgwè ndị egwu na mariachis. Can nwere ike ịtuo ha mgbe ha gafere gị na ọbụna rịọ maka abụ pụrụ iche. Ọwa mmiri ndị ahụ mara mma, ụgbọ mmiri ndị ahụ mara mma ma ị nwere ike ịhụ obodo ahụ n’ebe dị anya, ụlọ ndị dị nso na ubi ha ndị gbadara n’ọwa mmiri na ifuru.
Na mpaghara nke piers enwere ahịa ebe ị nwere ike ịzụta ọrụ aka na nri. Na oge ihe niile na-emeghe ma ọ bụrụ na ị na-aga n'oge oyi ma ọ bụ na ụbọchị izu, enwere ụfọdụ mechiri emechi.
Ezigbo ebe ịga ahịa bụ Ahịa Xochimilco, blọk abụọ nwere ọtụtụ ụlọ na-ere nri nke ụdị dị iche iche, akwa, ifuru, ihe okpukpe na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. N'ebe a ị nwere ike ịzụta ihe ị were maka ịnyagharị na trajineras, `` dịka ọmụmaatụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị e nwere ụgbọ mmiri ndị na-ere naanị nri ha anaghịkwa aga ije.
Iji mezuo ije ị nwere ike gaa na ndoputa ihe okike ihe karịrị akarị canals nke ahụ bụ ebe ị nwere ike lee otu uzo chinampa a siri rụọ ọrụ ma ọ bụrụ na ị nwere oge na mpaghara n'ozuzu enwere ebe nkiri ndị ọzọ.
Enwere ụlọ site n'oge Porfirio Díaz, santiguas ụlọ ụfọdụ ghọrọ ụlọ ahịa, n'okporo ámá Pedro Ramirez del Castillo na n'okporo ámá Benito Juarez. Bụ Oflọ Art na oflọ nke Cacique Apochquiyahuatzin.
Enwekwara ndi Templelọ Nsọ na ventlọ ndị San Sanardardino, nnukwu ihe ncheta. Ọ tọrọ ntọala site na Fray Martín de Valencia na 1535 ọ dịkwa ka nnukwu ụlọ, ya na mgbidi ya. Lọ mgbịrịgba ahụ sitere na 1716 ma nwee elekere site na 1872. Onye na-ekpo ọkụ si na 1604 ma bụrụ ezigbo ihe atụ nke ụmụ amaala na Spanish syncretism.
I nwekwara ike ile anya na Nkwari akụ Reforma, otu ụlọ site na mmalite narị afọ nke XNUMX nke hụrụ a nzukọ n'etiti Pancho Villa na Emiliano Zapata, ndị isi nke nnukwu mgbanwe Mexico, na ọmarịcha Capilla del Rosario nke malitere na narị afọ nke iri na asaa.
The nwere mmasị na nka nke Diego Rivera na Frida Kahlo? Ya mere ahapụla njem ahụ Dolores Olmedo Patiño Museum na na mgbakwunye na ọrụ nwere ogige mara mma ebe ekwuru ụlọ na-akpagharị.
Mexico bụ obodo mara mma, ma ị nwere ike ịsị na ị gara leta ya ma ọ bụrụ na ịnweghị ụgbọ mmiri site na Xochimilco.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Mexico » Gbọ mmiri kpochapụwo nke Xochimilco Gardens
Kedu ihe kpatara anyị ji amasị torrijas nke ukwuu n'oge Ista?
Omenala ndị Philippines